Anosizato : tampenan’ny olona ny RN1 teo aloha | NewsMada
Anosizato : tampenan’ny olona ny RN1 teo aloha
Miteraka savorovoro eo amin’ny mponina eny Anosizato ny famaritan’ny olona iray ny lalana RN1 taloha eny an-toerana. Arabe ambadiky ny FJKM mivoaka any Anosizato io. “Mbola miasa io lalana io, ary ampiasain’ny mponina. Nanorin-trano amoron’io arabe io ny ray aman-dreninay efa hatramin’ny taona 1940 tsy nisy olana ary tsy nesorin’ny fanjakana. Ankehitriny, misy milaza ho tompon’ny arabe ary mamaritra avy hatrany”, hoy ireo mponina eny an-toerana.
Araka ny fanazavana azo avy amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy, tsy azo ampiasain’ny olon-tsotra ireo lalam-pirenena teo aloha io raha toa ka tsy mbola nisy ilay “désaffectation”, izany hoe fanesorana azy tsy ho lalam-pirenena intsony. Raha ny momba ity RN1 teo aloha ity, tsy mbola nisy didy momba izany, raha ny fanazavana azo.
Omaly, tonga teny amin’ny RN1 teo aloha ny vadintany namaritra ny toerana, nilaza fa manana didim-pitsarana ka tsy tokony ho taitra ireo mponina. Ireto farany anefa, voakasika anatin’ny faritan’ireo milaza ho tompony ka tsy maintsy akisaka. Tantara mitohy…